OLIn Maalif? – OLI
Yeroo ammaa kanatti qeerron keenya kallattii hundaan dammaqiinsa guddaa keessatti argama. Dammaaqiinsa uumame kana bifa faaydaa qabeessa ta’een gara bu’aa qabatamaafi itti fufiinsa qabutti geeddaruuf immoo hoggansa tarsiimawaa haala qabatamaa Addunyaa waliin tarkaanfachuu danda’uu qabaachun baay’ee barbaachisaadha. Hoggansi kaayyofi galmi akka dhuunfattis ta’ee akka walootti lafa kaawwame akka dhugoomuuf gahee ol’aanaa tahe qaba. Kanaafuu dhimma ijoo kanarratti hojjachuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo hundi keenyayyuu itti gaafatama wal qixa tahe qabna.
Akka hayyootni hoggansaa jedhanitti, hoggansi kallattii ijoo lamaan uumamuu danda’a. Inni tokko uumamaan yommuu ta’u inni lammataa immoo barumsafi leenjidhaani. Hayyoonni tokko tokko dandeettin hoggansaa uumaadhaan qofa argama kan jedhan yommuu ta’u kanneen biroo tokko tokko immoo barumsan/leenjidhaan argama kanneen jedhanis ni jiru. Lamaanuu wal dandeessisuudhaan hoggansi kallattii lameeninuu ni argama kan jedhanis hedduudha.
Gara hundattuu waan tokko galmaan gahuuf hoggansi gahee guddaa akka taphatu hayyoonni hundinuu irratti waliigalu. Hoggansi immoo uummata keessaa burqa, qaama uummataati. Hoggansi qaama uummataa ta’uu irra dabree kan hawaasa sana sirriitti seenaa isaafi eenyummaa isaa gadi fageenyaan beeku, kan galmi uummata sanaa maal akka ta’e hubatuudha. Kanaafuu qaama akkanaa kana of keessaa burqisiisuun baay’ee barbaachisaadha.
Kaayyoofii akeekni guddaan kaka’umsa kanaa ( kan Oromiya Leadership Initiative) isuma kana. Xiyyeeffannaan isaa guddaan qeerroo keenya keessaa kan boru uummata ofii bifa miira tajaajilummaa ( servanthood)tiin tajaajila miidhagaa kennuu danda’an uumudha. Kanaaf immoo gama marsariitii kanaatiin qeerroon keenya akka hariiroo isaa cimsatu, akka leenjii sadarkaa isaa eeggate walirraa argatu, akka muuxannoo walirraa qooddatu haala mijeessudha.